Mipiro & Kuitwa - Prairie State Legal Services
mibairo & zvinoitwa
Mumakore apfuura, isu takazivikanwa nekuzvipira kwedu kune kugona mumasevhisi uye nehunyanzvi mukuendesa basa. Heano mashoma:
- Illinois Association of Area Agency pamusoro peKukwegura - Sid Granet Mubairo wehunyanzvi mukuendesa basa.
- Retirement Research Foundation Encore Mubairo wekugona.
-Gavhuna Mubairo weKusarudzika Kubudirira.
- Iyo Shriver National Center paPoverty Mutemo 2008 Housing Justice Award.
- "Muenzaniso wakanaka kune avo vakapara mhosva" (Victim Justice Coalition, 1997)
- Partner muMunyararo Mubairo (Nharaunda Crisis Center 1995 uye 2006)
- National Pro Bono Partner Mubairo wekubatanidzwa kwemagweta emakambani mumasevhisi kune vakadzi vane mari shoma
(Sangano reCorporate Zano 2004)
- "Kwakanaka mashandiro" chiyero (Dhipatimendi reU.S. reDzimba nedzemaguta (gore rega rega 2004 kusvika 2009)
Prairie State Legal Services inochengetedza masevhisi uye hutano hwemwana
Joan *, akaparadzaniswa nemurume aimbova murume nekuda kwemhirizhonga mudzimba, akawana basa kubhangi, asi akarasikirwa nebasa rake apo kukuvara kwakamusiya asisakwanise kushanda. Akazviriritira uye nevana vana paSocial Security kuremara, SSI mabhenefiti, uye shoma shoma yerubatsiro rubatsiro kubva kuguta kwaaigara. Joan haana kumbobvira agamuchira rutsigiro rwemwana uye aiziva kuti aisazombogona kuitambira. Paakauya kuPrairie State, ComEd naNICOR vakawedzera zvinoshamisa zvikwereti zvavo nekumubhadharisa zvisiri pamutemo mabasa ekushandisa aishandiswa newaimbova murume wake pekugara kwavo mushure mekurambana kwavo. Paakange asingakwanise kubhadhara aya mashandisirwo emabhizimusi, kambani yemagetsi yakatyisidzira kudimbura chishandiso chake. Mumwe wevana vaJoan aive neasthma uye aida nebulizer, yaida magetsi. ComEd yaisazobvuma tsamba yechiremba yekuchengeta magetsi kunze kwekunge Joan abvuma kubhadhara madhora mazana mashanu nekukurumidza uye akabvuma kubhadhara mari yasara mukati memazuva makumi matatu. Magweta kuPrairie State akabatsira Joan nevana vake kuti vagare mumba make uye vadzivise kubviswa kwezvinhu zvake.
Prairie State Legal Services zvinobudirira kuwedzera Social Security mabhenefiti kuna Maria *
Maria aive pakati pemakore makumi mana paakasvika kuPrairie State, asi anga achinetseka nehurema, senge schizophrenia, kubvira pakati pemakore makumi maviri. Akanga achigamuchira mabhenefiti eSocial Security nekuremara nekuda kwehurema uhu. Maria aifanira kunge akawana mamwe mabhenefiti kubva pane nhoroondo yebasa rababa vake nekuti hurema hwake hwakatanga asati asvitsa makore makumi maviri nemaviri. Zvisinei, veSocial Security Administration vakaramba chikumbiro chavo chemamwe mabhenefiti Mukutongwa kwehutongi, magweta ePrairie State aifanirwa kuratidza kuti Maria akaremara asati asvitsa makore makumi maviri nemaviri uye kuti nhoroondo yake yebasa ishoma haina kumutadzisa kuwana mabhenefiti kubva kubhuku rababa vake. Prairie Nyika yakaratidzwa humbowo uye kugutsikana mutongi, saka Maria akakodzera kuwana mabhenefiti.
Prairie State Legal Services inodzivirira kudzingwa nekuwana pekugara pakakodzera pasi peFair Housing Act
Linda * aive mugari wechikamu 8 cheprojekti-yakavakirwa dzimba dzimba kweanopfuura makore makumi maviri. Achiri kunetsekana neasina kurapwa bipolar mamiriro, akatanga kuratidza zvinoshamisa uye zvinoshungurudza maitiro munzvimbo yacho. Izvi zvakaita kuti muridzi wemba yaLinda aendeswe sutu kuti amudzinge, achityisidzira kumuita asina pekugara. Magweta kuPrairie State akakumbira pekugara pakaringana nehurema hwake - kuti ambomisa kudzingwa kwacho paiitika Linda achienda kuchipatara chekurapwa kuti agadzikane hutano hwake uye kuti ateedzerwe nemishonga nekupangwa mazano. Linda akaendeswa mberi pane izvi, muridzi wemba akacherekedza kufambira mberi kwaLinda, uye akazorega nyaya yekudzingwa.
Prairie State Legal Services inoponesa dzimba dzaLawrence * dzinopihwa rubatsiro
Vakuru veDzimba Dzemunharaunda vakagumisa gwaro rekusarudza Housing Sarudzo yemurume ane makore makumi manomwe, Lawrence. * Vhavha iyi yakaita kuti Lawrence agare mufurati raaikwanisa kutenga. Lawrence akavhiyiwa kenza yehuro uye aive achirapwa chemotherapy apo Housing Authority yakagumisa vocha yake. Housing Authority yakatora danho iri nekuti Lawrence akatadza kuzivisa semari yepenjeni diki yemadhora makumi matanhatu nemaviri pamwedzi yaakatambira kwemakore mashanu, zvinova zvakakanganisa huwandu hwemaroja aakabhadharwa. Lawrence akatenda zvisirizvo kuti akambotaura mari iyi sechikamu chemari yake yeSocial Security. Nekudaro, iyo Housing Authority yakatumidza iko kukundikana nemaune kumhan'ara mari. Prairie State Legal Services yakamiririra Lawrence pakutongwa kwake kwekutongwa pachikumbiro uye akabudirira kuratidza kuti Lawrence akaita chikanganiso, icho chaisave nechinangwa. Zvichienderana nezera raLawrence uye nematambudziko ehutano, Nyika yePrairie yakakumbira pekugara zvine mutsindo kuitira kuti Lawrence agamuchire rubatsiro nekumhan'ara mune ramangwana kugadzirisazve kukodzera kwevhavha yake. Sarudzo yekunzwa iyi yainge iri mukufarira kwaLawrence, kuchinjisa danho rekutanga kumisa voucha yake, uye kubvumira Lawrence kubhadhara mutsauko wemaroja kuburikidza nehurongwa hwekubhadhara. Izvi zvakatendera Lawrence kuchengetedza imba yake yaakapihwa rubatsiro uye kudzivirira kushaya pekugara.
* Mazita akachinjwa kuchengetedza kuzivikanwa kwevatengi vedu uye kuchengetedza zvakavanzika.
4 maawa apfuura